China Manamboatra mpamokatra sy mpamatsy «veneer aluminium» Chenyu
Ny tontonana aluminium dia vita amin'ny firaka aliminioma avo lenta, ary ahodin'ireo teknika fanodinana isan-karazany toy ny fanapahana, famoritana, hiondrika, fanamafisana, fanamafisana, fikosehana, hosodoko, sns. toerana fampivoarana raha ampitahaina amin'ny fitaovana ivelany toy ny taila tanimanga, vera, tontonana mitambatra aliminioma, tontonana tantely ary marbra.
Ny fandaminana ireo lavaka famelezana dia mamolavola lamina maro isan-karazany, novelomina ny firafitra ary misy vokany tsara amin'ny fihenan'ny tabataba izany. Amin'ny fototry ny lamba tsy tenona, ny fibre fitaratra matevina 40mm dia ampiana mba hampihena ny tabataba sy ny fihenan'ny tabataba.
1. Miloko, mateza, tsy mihena,
Ny rindrina vita amin'ny alim-baravarankely vita amin'ny alimina dia vita amin'ny takelaka firaka alimina avo lenta avo lenta, ary ny hateviny mahazatra dia 2.0, 2.5,3.0, ny maodely dia andiany 1001, andiany 3003, ny toerana dia H24. Ny ankamaroan'ny fitaovana mahazatra, ny habe lehibe dia 1300mmX4000mm. Ny firafiny dia miorina amin'ny takelaka, hamafitra ary fehezan-kaody Angular. Ny fehezan-dalàna zorony dia azo atondrika mivantana ary hohomboan'ny tontonana, ary azo aforitra amin'ny tontonana ihany koa.
Ny henjana dia mifamatotra amin'ny visy vy any ambadiky ny vatan'ny tabilao, mahatonga azy io ho mafy orina, manatsara be ny tanjaka sy ny hamafin'ny rindrin'ny ambain-drivotra veneer aluminium, ary miantoka ny fisaka amin'ny fampiasana maharitra sy fanoherana ny horohoron-tany. Raha ilaina ny fanamafisam-peo, dia azo apetraka ao anaty lozisialy Insulated Materials ny insulation feo mahomby.
(1) Haingo ny rindrina ivelany sy ny akanjo mitafy.
(2) Ny rindrina anatiny, ny valindrihana, ny lavarangana, ny tarehy, ny andry, ny firafitra, ny tranony ivelany, sns.
Teo aloha: Panel fitambaran-tsoratry ny aluminium
Manaraka: Vato vita amin'ny alimina vita amin'ny aluminium